वृश्चिक Archives - सत्य वेद पुुस्तकहरू
स्कोर्पियो, जसलाई वृश्चिक पनि भनिन्छ, यसले प्राचीन ज्योतिषाको तेस्रो नक्षत्र बनाउँछ र विषाच्छी बिच्छीको छवि प्रस्तुत गर्दछ। वृश्चिक साना नक्षत्रहरू (डेक्सन) ओपियसस, सर्पेन्स र कोरोना बोरेलिससँग सम्बद्ध छ। आधुनिक राशिफल ज्योतिष राशिफलको अध्ययनमा, तपाईं कुंडलीबाट प्रेम, सौभाग्य, स्वास्थ्य र तपाईंको व्यक्तित्वमा अन्तरदृष्टि प्राप्त गर्न कुंडली सल्लाह अनुसरण गर्नुहुन्छ।
तर के यो सुरुमा यसरी नै अध्ययन गरिएको थियो?
हामीले प्राचीन ज्योतिषको अन्वेषण गर्‍यौं र प्राचीन कुंडलीको कन्या र तुला राशिको जाँच गरेपछि हामी वृश्चिकसँग निरन्तरता दिन्छौं।
वृश्चिक कहाँबाट सुरु भयो?
यहाँ स्कर्पियो वा वृश्चिक बनाउने ताराहरूको तस्वीर छ। के तपाईं ताराहरूको यो फोटोमा बिच्छी देख्न सक्नुहुन्छ? तपाईलाई धेरै कल्पना चाहिन्छ!
वृश्चिक ताराहरूको फोटो। के तपाईं बिच्छी देख्न सक्नुहुन्छ?
यदि हामीले ‘वृश्चिक’ ताराहरू लाई रेखाका साथ जोडे पनि यो बिच्छीलाई हेर्न गाह्रो छ। तर यो चिन्ह प्राचीन समयमा जान्छ जहाँसम्म हामी मानव इतिहास मा थाहा छ।
वृश्चिक नक्षत्र रेखाहरू द्वारा जोडिएको। उठेको पुच्छर स्पष्ट छ। तर तपाइँ कसरी थाहा पाउनुहुन्छ कि यो एक बिच्छी हो न कि अंकुश हो।
यहाँ इजिप्टको डेन्डेरा मन्दिरमा राशि छ,२००० वर्ष पुरानो तस्वीर बिच्छीलाई रातो घेरामा देखाइएको छ ।वृश्चिक मिस्रको डेन्डेरा राशिमा
द नेशनल ज्योग्राफिक राशिफल पोस्टरले दक्षिणी गोलार्धमा देखा परेको वृश्चिक राशि देखाउँदछ। जे होस् द नेशनल ज्योग्राफिकले रेखालाई वृश्चिक तारे बनाउने ताराहरूलाई जोडेको छ तर यो तारा नक्षत्रमा बिच्छीलाई ‘हेर्न’ गाह्रो छ।
वृश्चिक एक राष्ट्रीय भौगोलिक राशि पोष्टरमा रूपरेखा
अघिल्लो नक्षत्रहरू जस्तै, बिच्छीको आक्रमणको लागि तयार भएको चिन्ह पहिले ताराबाट देखिएन। बरु, हड्ताल बिच्छीको विचार पहिले आयो। पहिले ज्योतिषीहरूले यस विचारलाई ताराहरूमा एकै ठाउँमा समावेस गरे। प्राचीनहरूले वृश्चिकलाई आफ्ना बच्चाहरू समेट्न र यससँग सम्बन्धित कथा भन्न सक्दछन्।
प्राचीन राशि कथा
राशीय नक्षत्रहरू सँगै एक कथा गठन गर्दछ – एक ज्योतिषीय कथा तारा संग लेखिएको छ। वृश्चिकको चिन्ह बाह्र मध्यको तेस्रो कुंडली हो। हामीले देख्यौं कि बाइबलले प्राचीन कालदेखि भनेका थिए कि सृष्टिकर्ताले ती राशी नक्षत्रहरूलाई चिन्ह लगाउनुभयो। त्यसोभए यो मानव इतिहासको सुरुदेखि नै रचना गरिएको उहाँको कथा हो। यो ज्योतिष कथा हो कि पहिलो मानवहरूले जुन अध्ययन हामीलाई अहिले राशिफलका रूपमा चिनिन्छन्।
त्यसोभए मूल राशिफल तपाईको दैनिक निर्णयहरू लाई शुभ भाग्य, स्वास्थ्य, प्रेम र भाग्य ग्रहण गर्न को लागी तपाईंको जन्म को समय र स्थान मा मार्गदर्शन गर्न कुंडली थिएन। यो सृष्टिकर्ताको मार्गनिर्देशन हो जसले उहाँको योजना टिपोट गर्दछ ताकि मानिसहरूले यसलाई हरेक रात देख्न र याद गर्न सक्दछन्। कथा कन्याबाट बीजको प्रतिज्ञाबाट सुरु भयो। यो तुला राशिको तराजुको साथ जारी रह्यो, घोषणा गरेर कि हाम्रो कामको सन्तुलन स्वर्गको राज्यको लागि एकदम हलुका छ। हाम्रो हलुका कार्यहरूको छुटकारा गर्न एक कर्म भुक्तानी तिर्नु पर्छ।
वृश्चिक कुंडली प्राचीन राशि चक्रमा
तर कसले यो भुक्तानीको माग गरिरहेको छ? वृश्चिक ले हामीलाई कन्याको बीउ र बिच्छीको बीचको स्वर्गीय संघर्षलाई प्रकट गर्दछ। यो द्वन्द्वलाई बुझ्नको लागि हामीले बिच्छी र यसको डेकान (यससँग जोडिएको तारामंडल) ओफिससको साथ हेर्नु पर्छ।
वृश्चिक र ओफिसस नक्षत्र। १८८६ को मोशा र जियोलोजीको संस्करणबाट (शमूएल किन्स, लन्डन)।
नक्षत्रले एक विशाल बिच्छी (वृश्चिक) लाई कुर्कुच्चामा एक शक्तिशाली मानिस (ओफिचस) टाँस्न खोज्ने चित्रण गर्छ, जबकि ओफिसस बिच्छीमा कुल्चीरहेको छ र एकै साथ एक गुंडाइएको सर्प कुस्ती। यो विशाल बिच्छीले यसको पुच्छर रिसाएर उठाएको छ, मानिसको खुट्टामा प्रहार गर्न तयार छ। यो चिह्नले हामीलाई यो द्वन्द्व मृत्युमा रहेको बताउँछ। वृश्चिकमा हामी तुलाको तिर्ने मोल तिर्न सिक्छौं तुला राशिबाट न्यायको तराजू। वृश्चिक र सर्प (सर्पन्स) समान शत्रुका दुई चित्र हुन् – शैतान।
ताराहरूमा यो चिन्हले सुरुमा मनु / आदमलाई दिएको प्रतिज्ञा दोहोर्याउँछ र उत्पत्तिमा टिपोट गरिएको छ जब यहोवाले सर्पलाई कन्याको सन्तानको बारेमा बताउनुभयो ।
तेरो र स्‍त्रीको बीचमा, र तेरो सन्‍तान र स्‍त्रीको सन्‍तानको बीचमा म दुश्‍मनी हालिदिनेछु। त्‍यसले तेरो शिर कुच्‍च्‍याउनेछ, र तैंले त्‍यसको कुर्कुच्‍चो डस्‍नेछस्‌।”
बिच्छीको डसाई येशूको क्रूसमा भोग्नु भएको थियो, तर बिच्छीले प्राणघातक पराजय भोग्यो जब येशू तीन दिन पछि मृत्युबाट बौरी उठ्नुभयो। वृश्चिक, ओफिसस र सर्पले यो धेरै पहिला भविष्यवाणी गरेको हो।
वृश्चिकसँगको द्वन्द्व अरूहरुको यादमा
प्राचीन संस्कृतिहरूले देखाए कि तिनीहरूले बगैंचामा शुरू भएको र यो क्रसमा चरमोत्कर्षमा पुग्न यो प्रतिज्ञा गरिएको संघर्षको सम्झना गरे।
२२०० ईसा पूर्व ब्रिटिश संग्रहालयमा बेबिलोनको छापले आदम र हवा र सर्पको प्रलोभन देखाउँदै
पुरानो मिश्रीको मृत्युको पुस्तकमा सर्पको शिर कुचियो
यी दुई छविहरूले देखाउँदछ कि कसरी दुबै पुरातन मिश्रीहरू र बेबिलोनीहरूले यी घटनाहरूलाई प्रमोदवनमा सम्झना गरे र सर्पको टाउको कुल्चने वचन पनि दिए। पुरातन ग्रीकहरूले यो वृश्चिक मार्फत याद गरे।
एराटस प्रस्थान चौथो शताब्दी ईसापूर्व ग्रीस कविको उद्धरण गर्दै
कोरोना बोरेलिसमा सर्प र मुकुट वृश्चिकसँग सम्बन्धित
तेस्रो डेकन कोरोना बोरेलिस – ओफिसस र सर्पमाथि राखिएको मुकुट हो। सँगै देखाइएको तीन वृश्चिक डेकनको एक विशिष्ट ज्योतिषीय छवि अवलोकन गर्नुहोस्।
ओफिसस र सर्प कोरोना बोरेलिसको नजर
दुबै ओफिसस र सर्पले मुकुटलाई हेरिरहेका छन – नक्षत्र को कोरोना बोरेलिस भनेर चिनिन्छ। वास्तवमा, यी दुवैले यो मुकुटको लागि संघर्ष गरिरहेका छन् र हामी देख्न सक्छौं कि सर्पले कोरोना बोरेलिसलाई समात्ने प्रयास गरिरहेका छन्।
सर्प (सर्पन्स) नक्षत्र नजिक – मुकुट समात्ने प्रयास- कोरोना बोरेलिस
सर्पले मुकुटलाई समात्न प्रयास गरिरहेको छ। यसले ती दुई बिचको द्वन्द्वको प्रकृतिलाई चित्रण गर्दछ। यो मृत्यु मात्र द्वन्द्व-मृत्यु हो, तर यो शासन र प्रभुत्वको लागि संघर्ष हो। सर्प र ओफिसस मुकुट को लागी लडाई गरिरहेकाछन् ।
वृश्चिकमा तपाई र मेरो लागि कथा
वृश्चिक सबै व्यक्तिको लागि हो, एक विशेष समयमा जन्मेको लागि मात्र होइन । यो अधिक धन वा प्रेमको लागि मार्गनिर्देशन होईन, तर पुरानो समयदेखि नै मानिसहरूलाई हाम्रो हलुका कार्यहरूबाट हामीलाई छुटकारा दिनको लागि कत्ति ठूलो समय हुनेछ भनेर सम्झन मद्दत पुर्‍याउँछ, मृत्युसम्म ठूलो संघर्ष गर्नु पर्ने, र शासन र विजय गर्ने अधिकारको लागि। ‘शासक’ वास्तवमा “ख्रीष्ट” को अर्थ हो।
प्राचीन वृश्चिक राशिफल
कुंडली ग्रीकबाट “होरो” (घण्टा) बाट आएको हो र भविष्यसूचक लेखहरूले हाम्रो लागि घण्टा ( समय) महत्त्वपूर्ण छ, हामी तिनीहरूको वृश्चिक ‘घण्टा’ याद गर्न सक्छौं। वृश्चिक होरो भनेको
३१.अब यस संसारको न्‍याय हुन्‍छ। यस संसारको शासक बाहिर फालिनेछ। ३२.अनि जब म पृथ्‍वीबाट उचालिन्‍छु, म सबै मानिसलाई आफूतिर खिँच्‍नेछु।” ३३.उहाँको मृत्‍यु कुन प्रकारले हुने हो, सो सङ्केत दिनलाई उहाँले यसो भन्‍नुभएको थियो।
म तिमीहरूसँग अब धेरै बोल्‍नेछैनँ, किनभने यस संसारको शासक आइरहेछ। त्‍यसको ममाथि केही शक्ति छैन।
शुरुमा “अब समय यही हो ” भनेर बताउँदा येशूले हाम्रोलागि यो ‘होरो’ चिह्नित गर्नुभयो। वृश्चिकले कसले शासन गर्ने भन्ने विवादको बारेमा बताउँछ। त्यसकारण येशू शैतानलाई ‘यस संसारको राजकुमार’ भनेर बोलाउनुहुन्छ र त्यो समयमा झगडामा त्यो उहाँलाई भेट्न आउँदै थियो। हाम्रो कामको सन्तुलन हलुका भएकोले शैतानले हामी सबैलाई समातेको छ। तर येशूले निर्धक्क भएर भन्नुभएको छ कि त्यसले मलाई “मलाई रोकेर राख्न सकेन “, जसको अर्थ हो कि पाप र मृत्युको शक्तिले उहाँमाथि कुनै अधिकार जमाएको थिएन। ती होरोले यो कथनको परीक्षण गर्दछ किनकि यी दुई विरोधीहरूले एक अर्काको सामना गरेका थिए।
तपाईंको वृश्चिक अध्ययन
हामी आज दिशानिर्देशको साथ वृश्चिक राशिफल पढ्न र लागू गर्न सक्छौं।
वृश्चिक हामीलाई बताउँदछ कि तपाईंले कसैको सेवा गर्नु पर्छ। कसैको तपाइँको हृदयको मुकुटको, दावी छ। यो एक प्रेमी, जीवनसाथी वा सम्बन्ध होइन कि तपाइँको हृदयको मुकुटमा अन्तिम दावी छ। यो या त “यस संसारको राजकुमार” वा “ख्रिष्ट” हो – जो एक जनाले परमेश्वरको राज्यमा शासन गर्दछ। तपाईको मुकुट को छ भनेर अब शीघ्रतापूर्वक बढ्नुहोस्। यदि तपाईं आफ्नै जीवन बचाउन बस्नुहुन्छ भने तपाईंले आफ्नो मुकुट ‘यस संसारको राजकुमार’ लाई दिनुभयो र तपाईंले आफ्नो जीवन गुमाउनुहुनेछ। किनकि वृश्चिकको लक्षणहरू मार्नु, चोरी गर्नु र नाश गर्नु हो, यदि त्यो तपाईंको मुकुट हो भने उहाँ तपाईंको लागि उपयुक्त हुनुहुन्न।
आफैले आफैलाई जाँच्नुहोस् कि तपाईले येशूलाई यति स्पष्ट रूपमा सिकाए जस्तै ‘पश्चाताप’ गर्नु आवश्यक छ कि छैन। यसको मतलबको बारेमा राम्रो विचार पाउनको लागि तपाईं केही राम्रो उदाहरणहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ। यो ग्रहहरू होइन तर तपाईंको हृदयले तपाईंको लागि परिणाम निर्धारण गर्दछ। पछ्याउनु पर्ने असल उदाहरणहरू पवित्र संतहरू होइनन् तर साधारण व्यक्तिहरू हुन् जसले पश्चात्ताप गर्छन्। पश्चाताप हप्ताको कुनै पनि दिनमा गर्न सकिन्छ र सायद यसलाई बानीमा परिणत गर्न दैनिक आधारमा गरिनुपर्दछ।
थप वृश्चिक राशिका कथाहरू र गहिरो बुझाइ
दुई ठूला विरोधीहरू बीचको संघर्षको कथा धनुसँग जारी छ। यहाँको प्राचीन ज्योतिषा कथाको आधार सिक्नुहोस्। कथा कन्याबाट सुरु भयो।
तर वृश्चिक दृश्यको बारेमा लिखित रेकर्डको गहिराइमा जान
‘ख्रीष्ट’ को अर्थ के हो?
अफिसस मानिस सबैको लागि आउँदै – वर्ण देखि अवर्नामा
येशू शैतानको प्रलोभनमा पर्नुभयो – त्यो प्राचीन असुर सर्प होलिकाको
विश्वासघातको साथ शैतानले प्रहार गर्न जोडतोड गर्छ
लेखक Ragnarप्रकाशित 02/06/2021 02/06/2021 श्रेणिया ज्योतिषा (Jyotish)टैग्स दैनिक राशिफल, वृश्चिक, वृश्चिक आज, वृश्चिक तारा चिन्ह, वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशिफल, वृश्चिक वृश्चिकतपाइँको वृश्चिक रासी पुरातन राशिफल पर एक टिप्पणी छोड़ें